सिल्टल विशेषज्ञले उत्तम स्क्रैपिंग वेबसाइटहरू परिभाषित गर्दछ
वेब स्क्रैपिंग वेब खोजीकर्ताहरु र निगमहरु दुवै को लागी एक लाभकारी प्रक्रिया हो जुन विभिन्न वेबसाइटहरु बाट जानकारी को एक थोक को खोज गर्न को लागि। निम्न शीर्ष7वेबसाइटहरू छन् जुन वेब खोजकर्ताहरू अविश्वसनीय क्रल गर्ने उपकरणहरू प्रदान गर्छन्।
यो एक धेरै प्रभावकारी स्क्रैप प्लेटफर्म हो, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको विभिन्न वेबसाइटबाट आवश्यक सबै डाटाहरू हटाउन सक्छन्। यसले धेरै विकल्पहरूको साथ सरल प्लेटफर्म प्रयोग गर्दछ। उदाहरणका लागि, यो शुरुवातकर्ताहरूको लागि साइट मार्फत कसरी नेविगेट गर्ने थाहा छैन को लागि केहि धेरै सरल उपकरण प्रदान गर्दछ।
यो एक सजिलो छ वेब स्क्रैपर उपकरण, जुन वेब सर्भरहरूमा धेरै निकासी विकल्पहरू दिन्छ। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू धेरै चाँडै आवश्यक डाटा फेला पार्न र भण्डार गर्नको लागि एक राम्रो अनलाइन अनुसन्धान गर्न सक्छन्। स्क्रैपर एक नि: शुल्क वेब निकासी उपकरण हो, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सानो XPaths स्वत: उत्पन्न गर्न अवसर दिन्छ।
3 - cat5e and cat6 comparison speed. पार्स ह्यूब
यो एउटा अन्य महान वेब हो कि प्लेटफार्म स्क्रैपिंग हो जसले यसको प्रयोगकर्ताहरु लाई उत्कृष्ट संभावनाहरु प्रदान गर्दछ। उदाहरणको लागि, यसले मुख्य पृष्ठहरूलाई समर्थन गर्दछ जसले अज्याक्स र जाभास्क्रिप्ट प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ। पार्स गर्नुहोस् कागजातहरू फेला पार्न र विश्लेषण गर्न उन्नत तरिका प्रयोग गर्दछ। यो अनुप्रयोगले लिनक्स र विन्डोज जस्ता प्रणालीहरू समर्थन गर्दछ। भिजुअल स्क्रैपर यो एक सरल वेब निष्कर्ष सुइट हो, जुन एक सरल र स्पष्ट इन्फेसेसन प्रदान गर्दछ।.यसको प्रयोगकर्ताले वेबमा विभिन्न वेबसाइटहरूबाट आवश्यक वास्तविक-समय डेटा सजिलै पाउन सक्दछ। यसबाहेक, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई एक दिनभित्र निश्चित समयमा चलाउन अनुसूचित गर्न विकल्प प्रदान गर्दछ। यसले डेटा डिलिवरी सेवा पनि प्रदान गर्छ।
Webhose.io एक क्रलिंग सुइट हो, जसका प्रयोगकर्ताहरूले तिनीहरूको लागि सबै महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा गर्न सक्छन्, जस्तै उत्पादनहरू, सम्पर्क जानकारी, मूल्यहरू र थप सूचीहरू तिनीहरूको कम्प्यूटरमा अलग ढाँचाहरू। साथै, यो उनीहरूलाई निश्चित फिल्टरहरू प्रयोग गरेर केही फिल्टरहरू धेरै भाषा सामग्रीबाट धेरै भाषाहरू प्रयोग गरेर प्रदान गर्दछ।
वेब सर्भरहरूले यो वेब निष्कर्षण प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सजिलै बिना कुनै पनि कोड प्रयोग गर्न सक्दछ। वास्तवमा, तिनीहरू आफ्नै आफ्नै डेटासेट बनाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, उनीहरूले धेरै वेब पृष्ठबाट आवश्यक जानकारी खोज्न सक्दछन् र त्यसपछि उनीहरूले डेटासेटमा उनीहरूको डेटासेटमा भण्डार गर्न सक्छन्। मानिसहरूले धेरै वेब पृष्ठहरु स्क्रैप गर्न सक्छन् र परिणामहरू केहि मिनेटमा प्राप्त गर्न सक्छन्।
6. सामग्री ग्रेड
यसले यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई राम्रो वेब निकासी उपकरण प्रदान गर्दछ। नतिजाको रूपमा, धेरै व्यवसायहरू पाब फसल डेटा विभिन्न अत्यधिक गतिशील वेब पृष्ठहरूबाट, उनीहरूको एजेन्टहरू प्रयोग गरेर, उनीहरूलाई आवश्यक सबै सामग्री संकलन गर्न। यस तरिका, तिनीहरू सबै प्रतियोगिहरु को विश्लेषण गर्न सक्छन्, ताकि उनको प्रतियोगिहरुलाई पराजित गर्न र आफ्नो कम्पनी को प्रदर्शन लाई बढावा दिन सक्छ। त्यसोभए, प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो डेटामा विभिन्न डेटाबेस ढाँचामा सबै डेटा भण्डारण गर्न सक्छन्। प्रयोगकर्ताहरूले सबै सङ्कलन डेटा आफ्नो छनोटको ढाँचामा निकाल्न सक्छन्।
यो एक स्वचालित वेब स्क्रैप सफ्टवेयर हो, जसले यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्कृष्ट स्वचालन विकास वातावरण प्रदान गर्दछ। वेब सर्भरले यो कार्यक्रम रोबोट कार्यप्रवाहको छिटो र सजिलो कन्फिगुरेसनसँग स्थापना गर्न सक्छ। यूआईपथका असाधारण उपकरणहरू एक्स्टेन्बल र खुला छन्, वेब खोजीकर्ताहरूले प्रक्रियाहरूको स्वचालित रूपमा स्वचालित रूपमा र तिनीहरूको फोल्डरहरूमा भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, एक बलियो पुस्तकालयले वेब खोजीकर्ताहरूका लागि स्वचालनलाई प्रभावकारी अनुभव प्रदान गर्दछ।